Mucaaradka oo doonaya kursiga QM - BBC Somali - Warar
Mucaaradka oo doonaya kursiga QM
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Abriil, 2013, 01:17 GMT 04:17 SGA
Suuriya waxa weli ka socda dagaal aan dhinacna ku adkaan
Isbahaysiga Mucaaradlka Suuriya ugu weyn ayaa qorsheynaya inay u dagaallamaan kursiga dalku ku leeyahay Qaramada Midoobay oo ay waddalada ku fariisato, kadib markii bishii hore ururka jaamacadda Carabta ay si rasmi ah u aqoonsadeen mucaaradka inay yihiin cidda rasmiga ah ee mataleysa shacabka Suuriya.
Si kastaba ha ahaatee waxa ay u badan tahay inay adkaan doonto inay ku fariistaan kursiga QM.
Egayga cusub ee mucaaradka ee Qaramada Midoobay Najib Ghadban, waxa uu qaatay hawl aad u culus, in Dimishiq uu ka cayriyo kurisgeeda QM isaga oo doonaya in cod golaha loo dhan yahay ee QM uu u qaado arrintan sanadkan dhmaadkiisa.
Waxa uu rajeynayaa in talaabadii ay qaadaay Jaamacadda Carabta ee bishii hore ay si rasmi ah gursiga Suuriya u siisay mucaaradka inay culeys u sii yeeli doonto arrinytan.
Waxaa kale oo uu rajeynayaa in mucaaradku ay muujin karaan awood ay ku maamuli karaan goobaha ay heystaan ee dalka Suuriya bilaha soo socda,
Dagaalka Suuriya waxa uu sababay burbur weyn
114 dal oo isugu yeera inay yihiin saaxiibada Suuriya ayaa aqoonsaday sharcinimada isbahaysiga mucaaradka Suuriya, heerar kala duwan. Laakiin dhamaantood ma aanay balanqaadin weli inay talaabadan adag sameeyaan.
Dalalka kale ayaa walaac ka qaba waxa ay keeni karto arrintan,, qaarkoodna sida Ruushka, Shiinaha iyo Iran waaba ay ka soo horjeedaan.
Mr Ghadban waa uu ka war hayaa arrintu sida ay u adag tahay, laakiin waxa uu isku haleynayaa in dooddan damiir ahaan uu kaga guuleysto kuwa danaha siyaasadeed ka leh.
Dalalka Carabta waxaa laga sugayaa inay soo gudbiyaan qaraar ku saabsan suuriya oo la horkeenayo golaha loo dhan yahay.Kaasi oo ah in dagaalka Suuriya uu safka hore ka ahaado ajendaha QM, iyo weliba in la xoojiyo ololaha aqoonsi ee mucaaradka.
Si kastaba ha ahaatee diblomaasiyiinta ayaa ka digaya in qoraalkooda hadda uu yahay mid hal dhinac oo kaliya mucaaradka u xaglinaya si ay taageero balaaran u helaan.
Bariga Afrika Magaalooyinka la qabsaday oo laga qaxay